Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Kubvumbi 12, 2021
Mutungamiri webato rinopikisa reMavambo Kusile Dawn Doctor Simba Makoni avo vaive munyori mukuru weSADC kwemakore gumi vanoti vanotambira kutumirwa kwemauto negungano iri kuMozambique sezvo riri rimwe donzvo rakaunza nyika idzi pamwe chete.
Mashoko atiri kutambira anoti chizvarwa cheZimbabwe VaNyasha Mugwagwa vainge vasiri kuzivikanwa kuti varipi kubva musi wa24 Kurume pakarwiswa nzvimbo yePalma mudunhu reCabo Delgado muMozambique vaonekwa vakafa.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers’ Union, PTUZ, ropomera bazi rezvedzidzo yepasi mhosva yekunyepa kuti rakanga rakagadzirira zvakakwana kudzivirira Covid-19 muzvikoro zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevana vechikoro nevarairidzi vabatwa nechirwere ichi.
Asi bazi redzidzo yepasi rinoti rinomira neshoko raro rekuti hurongwa hwarakaisa muzvikoro hwekudzivirira kupararira kweCovid-19, hwe Standard Operating Procedures, huri kushanda sezvinotarisirwa uye riri kugutsikana nahwo.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano dzoyambira vari kuputa nekunwa zvinodhaka kuti vari kuisa hupenyu hwavo munjodzi.
Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos chinoti chaunganidza vatambi vachinofunga kuti vanosimudza mukombe wePremier Soccer League gore rino.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa kutanga kupararira kwoita chirwere cheCovid-19 muzvikoro.
Vanoda kutererera Studio7, tibateyi na7pm pamasaisai anoti 909 AM 4930, 6170 NE 7270 Kilohertz paShort Wave mazuva ose.
Munokwanisawo kunzwa Studio7 na6 am - Muvhuro kusvika Chishanu, pamasaisai anoti 909 4930 6040 15460